I-WordPress igqekeziwe? Amanyathelo alishumi okulungisa iBhlog yakho | Martech Zone
I-WordPress igqekeziwe? Amanyathelo alishumi okulungisa iBhlog yakho
NgoLwesibini, Aprili 27, 2010 NgoLwesithathu, Novemba 5, 2014 Douglas Karr
Umhlobo olungileyo wam kutsha nje ukuba ibhlog yakhe yeWordPress igqekeziwe. Yayiluhlaselo olubi olunokuba nefuthe kwinqanaba lakhe lokukhangela kwaye, ewe, namandla akhe kwezithuthi. Esi sesinye sezizathu zokuba ndicebise iinkampani ezinkulu ukuba zisebenzise iqonga lokubhloga ngokubambisana Isihlomelo - apho kukho iqela lokujonga elikujongileyo. (Ukubhengezwa: Ndingumnini zabelo)
Iinkampani aziqondi ukuba kutheni zingabhatala iqonga elifana neCompendium… de zindiqeshe ndisebenze ubusuku bonke ndizilungisa khulula Ibhlog yeWordPress! (I-FYI: IWordPress ikwabonelela nge Uhlobo lweVIP kunye neTypepad ikwabonelela nge Inguqulelo yeshishini. ) U
Kwabo bangakwaziyo ukubonelela ngeqonga lokubhloga ngeenkonzo abazibonelelayo, nantsi ingcebiso yam malunga nokwenza ukuba i-WordPress ityhobozelwe:
Hlala uphole! Ungaqali ukucima izinto kunye nokufaka zonke iintlobo zobunzima obuthembisa ukucoca ufakelo lwakho. Awazi ukuba ngubani oyibhalileyo nokuba uyayongeza na okanye hayi nje into engekho mthethweni kwibhlog yakho. Thatha umoya omninzi, khangela le blog, kwaye kancinci kwaye ngabom yehla kuluhlu lokutshekisha.
Thatha ibhlog yakho. Ngokukhawuleza. Eyona ndlela ilula yokwenza oku ngeWordPress kukuba kwakhona Isalathiso sefayile yakho ye-index.php kulawulo lweengcambu. Akwanelanga ukubeka nje isalathiso se-html iphepha… kufuneka umise lonke ukugcwala kulo naliphi na iphepha lebhlog yakho. Ekubekeni kwiphepha lakho le-index.php, layisha ifayile yokubhaliweyo ethi awuxhunyiwe kwi-intanethi kwaye uza kubuya kungekudala. Isizathu sokuba kufuneka uyithathe ibhlog yakho kungenxa yokuba uninzi lwezi hacks azenziwanga ngesandla, zenziwe ngeempendulo ezinobungozi ezinamathela kuzo zonke iifayile ezibhaliweyo kufakelo lwakho. Umntu otyelele iphepha langaphakathi lebhlog yakho unokuphinda abuyisele iifayile osebenzela ukuzilungisa.
Gcina ibhlog yakho. Sukugcina iifayile zakho, ukhuphele isiseko sedatha. Gcina kwindawo ethile ekhethekileyo kwimeko apho kuya kufuneka ubhekise kwezinye zeefayile okanye ulwazi.
Susa yonke imixholo. Imixholo yindlela elula yokuba umqhekeze kwiskripthi kwaye ufake ikhowudi kwibhlog yakho. Uninzi lwemixholo ikwabhalwe kakubi ngabaqulunqi abangayiqondiyo imeko yokufumana iphepha lakho, ikhowudi yakho, okanye isiseko sedatha.
Susa zonke iiplagi. Iiplagi zezona ndlela zilula ze-hacker kwiskripthi kwaye ufake ikhowudi kwibhlog yakho. Uninzi lweeplagi zibhalwa kakubi ngabaqulunqi abangaziqondiyo iindlela zokufumana amaphepha akho, ikhowudi yakho, okanye isiseko sedatha. Nje ukuba umqhekezi afumane ifayile enesango, bathumela abakhasayo abakhangela ezinye iisayithi zezo fayile.
Phinda ufake iWindowsPress. Xa ndisithi faka i-WordPress kwakhona, ndiyathetha-kubandakanya umxholo wakho. Ungalibali i-wp-config.php, ifayile engabhalwanga ngaphezulu xa ukopa ngaphezulu kweWordPress. Kule bhlog, ndafumanisa ukuba iscript esibi sasibhalwe kwiBase 64 ngoko ke yayijongeka ngathi ibhloko yombhalo kwaye yafakwa kwintloko kwiphepha ngalinye, kubandakanya ne-wp-config.php.
Ukuphonononga indawo yogcino lwedatha. Uya kufuna ukuphonononga uluhlu lwakho lwetheyibhile kunye netafile yezithuba zakho ikakhulu-ujonge naziphi na izingqinisiso zangaphandle ezingaqhelekanga okanye umxholo. Ukuba awuzange ujonge indawo yogcino lwedatha ngaphambili, zilungiselele ukufumana i-PHPMyAdmin okanye omnye umphathi wesicelo sedatha ngaphakathi kwepaneli yolawulo lomgcini wakho. Akumnandi- kodwa kunyanzelekile.
Ukuqalisa iWindowsPress ngomxholo ongagqibekanga kwaye akukho zi-plugins zifakiweyo. Ukuba umxholo wakho uvela kwaye awuboni naluphi na ulungelelwaniso oluzenzekelayo kwiindawo ezinobungozi, ulungile. Ukuba ufumana i-redirect kwisayithi enobungozi, uya kufuna ukucoca i-cache yakho ukuqinisekisa ukuba usebenza kwikopi yamva nje yephepha. Kuya kufuneka uhambe ngerekhodi yakho yedatha ngokurekhoda ukuzama ukufumana nawuphi na umxholo onokubakho ovula indlela kwibhlog yakho. Amathuba kukuba uvimba wakho ucocekile… kodwa ngekhe wazi!
Faka umxholo wakho. Ukuba ikhowudi enobungozi iphindaphindwe, uya kuba nomxholo osulelekileyo. Kuya kufuneka uhambe ngomgca ngomgca ngomxholo wakho ukuze uqiniseke ukuba akukho khowudi imbi. Kungangcono ukuba uqale ngokutsha. Vula ibhlog yakho ukuya kwiposti kwaye ubone ukuba usosulelekile na.
Faka iiPlagi zakho. Unokufuna ukusebenzisa iplagi, okokuqala, njenge Iinketho ezicocekileyo okokuqala, ukususa naluphi na ukhetho olongezelelweyo kwiiplagi ongasazisebenzisiyo okanye ongazifuniyo. Sukuphambana nangona kunjalo, le iplagin ayisiyiyo… ihlala ibonisa kwaye ikuvumela ukuba ucime useto ofuna ukuxhoma kulo. Khuphela zonke iiplagi zakho kwiWordPress. Sebenzisa ibhlog yakho kwakhona!
Ukuba ubona umba ubuya, kunokwenzeka ukuba ubuyisele kwakhona iplagi okanye umxholo osengozini. Ukuba umba awusoze ushiye, kungenzeka ukuba uzame ukuthatha iindlela ezimfutshane ekusombululeni le micimbi. Sukuthatha indlela emfutshane.
Aba baphangi ngabantu abakhohlakeleyo! Ukungayiqondi yonke iplagi kunye nomxholo wefayile kusibeka emngciphekweni, ke lumka. Faka iiplagi ezinamanqanaba aphezulu, ufakelo oluninzi, kunye nerekhodi enkulu yokukhuphela. Funda amagqabantshintshi abantu abadibene nawo.
tags: lungisa i-wordpressziqhekekelungisa i-wordpressI-wordpress igqekeziwe
I-Google Webmaster Central ifumana uPhuculo oluKhulu
Epreli 27, 2010 ngo-1: 29 PM
Enkosi ngeengcebiso ozikhankanye apha. Ndifuna ukubuza ukuba ngaba i-hacker iguqula igama eliyimfihlo lendawo yakho. Awunako nokuqhagamshela kwifolda ye-wordpress ngeFTP.
Epreli 27, 2010 ngo-8: 21 PM
Ndakhe yenzeka le nto ngaphambili. Eyona ndlela ilula yokuyiphatha kukuvula idatabase kwaye uhlele idilesi yakho ye-imeyile yomlawuli. Guqula idilesi ye-imeyile kwakhona kwidilesi yakho uze wenze ukuseta kwakhona igama lokugqitha. Ukusetha kwakhona ulawulo kuya kuthunyelwa kwidilesi yakho ye-imeyile kunokuba hackers - kwaye emva koko unokuzivalela ngaphandle okulungileyo.
Epreli 27, 2010 ngo-9: 52 PM
Izinto ezintle. Oku kusanda kwenzeka kumhlobo wam. Ngelisebenzise icebiso lakho.
UBrandon Corbin ✎
Epreli 28, 2010 ngo-8: 48 AM
Doug, ngaba uye wafumanisa ukuba yeyiphi iplagin esetyenzisiweyo ukuqhekeza?
Mar 24, 2011 ngo-6: 52 AM
Ndisandula ukufumana ibhlog yakho ngelixa ndikhangela ukulungisa umba wam wokukhangela indawo. Indawo yam - http://www.namaskarkolkata.com. ngequbuliso namhlanje ekuseni ndibone indawo yam yasePalestine Hacker - !! Iqhekezwe yi-T3eS !! . unganceda ujonge - ndingayilungisa njani. Bayitshintshile igama lam lomsebenzisi lomlawuli we-WordPress kunye negama lokugqitha kwaye ngelixa ndizama ukubuyisela nge-imeyile yam - iphelile. Ndiziva ndingenamandla. Ndicela undikhokele.
Mar 24, 2011 ngo 2:35 PM
Kukho ngokwenene indlela elula yokuthatha ulawulo lwangasemva. Ukusebenzisa inkqubo efana nephpMyAdmin elayishwe kwiindawo ezininzi, ungaya kwitafile ye-wp_users kwaye utshintshe idilesi ye-imeyile yomlawuli ubuyele kuwe. Ngelo xesha ungenza 'igama lokugqitha elibelekileyo' kwisikrini sokungena kwaye usete kwakhona igama lokugqitha.
Sebenza kwiKhaya 4Life
Agasti 21, 2011 kwi-1: 27 AM
Molo Doug - enkosi ngolu lungiso lukhawulezayo… ndinqwenela ukuba bendisazi malunga noku kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo xa enye yesayithi yam yaqhekezwa… inkxaso yokubamba ibikufuphi nengento yanto kwaye kuye kwafuneka ndiyilahle yonke indawo kwaye ndiqale kwakhona! Ndiyabulela kuwe, andizukuphinda ndidlule kule ntlungu kwakhona kwindawo yam yamva nje eye yagqekezwa. Naziphi na iingcebiso zokukhusela i-hacker? – ngombulelo, Dee
Agasti 22, 2011 kwi-2: 22 AM
Hi Dee - kukho ezinye iiplagi ngaphandle apho ezithintela naluphi na ukuhlelwa kwiifayile zakho zomxholo. I-WordPress Firewall 2 yenye yazo. Ayinakuhlaziya ifayile yomxholo ngaphandle kokunika imvume. Yintlungu encinci kumfana onjengam osoloko 'elungisa', kodwa mhlawumbi iplagin enkulu kumntu ongafuni ukubeka emngciphekweni nabani na okanye nasiphi na iskripthi sokungena apho kunye nokugqekeza indawo yakho!
Sep 19, 2011 ngo-10:30 PM
Molo apho, enkosi ngeposi yakho. Indawo yam ikhutshwe, kwaye ukuza kuthi ga ngoku konke okwenzekileyo bongeze abasebenzisi beWP kwaye bathumela izithuba ezintathu zeblogi. Umgcini wam wewebhu ucinga ukuba "i-bot" nje yophula igama lam lokugqitha leWP, kodwa ndinexhala. Ndatshintsha zonke iiphasiwedi zam, zongeze ukukhuselwa kwephasiwedi phantsi komhleli we-.htaccess, ndixhasa iifayile zeWP, izicwangciso zam umxholo kunye nedatha yam yolwazi kwaye ndibeke indawo phantsi kwesondlo- Konke ukulungiselela ukubuyisela iWP kunye nomxholo wam. Nangona kunjalo, le yinto enzima kwi-newbie. Ndibhidekile kwindlela yokubuyisela ngokucocekileyo iWP kunye nomxholo wam- ukuze kungabikho iifayile ezidala zihlala kwi-ftp server yam. Ndikwabhidekile malunga nokuphonononga ugcino lwedatha yam, ndijonge zonke iitafile zam kwiphpMYadmin- Ndingayibona njani ikhowudi engalunganga? eyona nto ikhathazayo kukuba ndigcina zonke iiplagi zam kunye neWP zihlaziyiwe, ngeveki. Enkosi ngoncedo lokucacisa konke oku!
Sep 20, 2011 kwi-12: 19 AM
Uninzi lwexesha, ziifayile ezikumxholo we-wp eziqhekezwa ngokugqekezwa. Ifayile yakho ye-wp-config.php ineziqinisekiso zakho kwaye ifolda yakho ye-wp inomxholo wakho kunye neeplagi. Ndiza kuzama ukukhuphela i-WordPress entsha yokufaka kunye nokukopa phezu kwayo yonke into kodwa i-wp-content directory. Emva koko uya kufuna ukuseta iimqinisekiso kwifayile entsha ye-wp-config.php (andizukusebenzisa endala). Ndingalumka kakhulu ndisebenzisa umxholo ofanayo kunye neeplagi ... ukuba enye yazo igqekeziwe, zinokuwusasaza umba kubo bonke.
Ikhowudi engalunganga ikhutshelwa kwifayile nganye kwaye isebenzisa amagama afana ne-eval okanye i-base64_decode…
Nje ukuba indawo yakho ibuyiselwe yonke into, unokuphinda ufake iplagi yokuskena eya kubona ukuba kukho naziphi na iifayile zengcambu zitshintshiwe, njenge: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-security-scan/
Sep 26, 2011 ngo-3:43 PM
Molo Doug! Ndicinga ukuba ibhlog yam igqekeziwe. Ndinolawulo phezu kwayo kodwa ukuba ndifuna ukwabelana nge-url yeposi kwi-LinkedIn isihloko semiboniso thenga z…. (isiyobisi) kwaye andazi ukuba ndenze ntoni okanye ndilungise njani. Ngokuqinisekileyo ndiziva ndingakhululekanga malunga nokuthatha ibhlog yam yonke… inkulu !!! Kwenzeka ntoni ukuba ndifaka i-wordpress entsha komnye uvimba weefayili kwaye emva koko ndongeza umxholo, ndivavanye kwaye ndivavanye iiplagi kwaye emva koko ndihambise wonke umxholo kwaye ndicime uvimba woqobo? Ngaba oku kuya kusebenza? i-url yam yebhlog yi-hispanic-marketing.com (ukuba ufuna ukuyijonga) enkosi kakhulu !!!
Sep 26, 2011 ngo-3:52 PM
Andiboni nabuphi na ubungqina bokuba indawo yakho igqekeziwe. Ngokuqhelekileyo xa indawo yakho igqekeziwe, umxholo wakho uphazamisekile ngoko ke ukubuyisela i-WordPress ngokwenene akuncedi kwaphela.
Feb 7, 2013 ngo-4: 16 PM
I-WordPress VIP inalolu hlobo lwenkxaso kodwa yenzelwe amashishini amakhulu. Kodwa banemveliso ebizwa ngokuba yiVaultPress engabizi kakhulu kwaye inenkxaso. Akukho nto ifana nenkxaso yetekhnoloji ye "WordPress". Ingcebiso yam iya kuba kukusingatha indawo yakho kwi-WPEngine - https://martech.zone/wpe – banenkxaso egqwesileyo, ii-backups ezizenzekelayo, ukujonga ukhuseleko, njl. Kwaye bakhawuleza kakhulu! Siyimbumba kwaye indawo yethu ibanjwe kuyo!
Feb 22, 2014 ngo-7: 47 PM
Molo Douglas, ndingathanda ukongeza kuluhlu lwakho njenge #11. Kufuneka kwakhona ungenise iwebhusayithi kwizixhobo zeWebmaster zikaGoogle ukuze zikwazi ukuyikhasa kwakhona kwaye ziyinike yonke into ecacileyo. Oku kudla ngokuthatha iiyure ezingama-24 kuphela ngoku, nto leyo emfutshane kakhulu kunangaphambili. Apho kuthathe iveki ukukhasa kwakhona.